Uwe nchebe, Uwe mkpuchi, Ọrụ Nchekwa - FCE
Ejiri nlezianya ahọrọ agba, njirimara, ihe kwesịrị ekwesị, ogologo oge na nha.
Iji mgbochi static ákwà, ọma ruru eru maka petrochemical ụlọ ọrụ.
Chebe onwe gị pụọ n'ihe ize ndụ.
Site na ngwakọta anyị na oge microlot nke na-agbanwe mgbe niile, anyị kpuchie gị.
Uwe eji arụ ọrụ n'ozuzu
ịzụ ahịa ugbu a
Uwe mkpuchi owu
Na ibu àgwà ngwaahịa, elu-arụmọrụ otu na nnukwu ọkọlọtọ echiche, Hebei FCE-enweta nkwanye na ntụkwasị obi nke ndị ahịa ihe karịrị afọ.
Site na QMS zuru oke na usoro ọrụ metụtara nchekwa, Hebei FCE bụ ụlọ ọrụ asambodo nke nwere asambodo ikike nchekwa LA pụrụ iche nke Ọchịchị State of Work Safety kwadoro.
HEBEI FCE SPECIAL PROTECTION APPAREL & ACCESSORIES COMPANY guzobere na 2009 aha ya bụ Hebei FCE Intertrade Corporation. N’afọ 2014, anyị gbanwere aha ugbu a. Anyị ọrụ dị na Chang'an District, Shijiazhuang City, Hebei Province, China.
Anyị na-elekwasị anya na mmepụta na ire nke uwe nchebe pụrụ iche, uwe na-eche nche nkịtị na uwe edo edo. Ihe ndị anyị mepụtara gụnyere jaket, T-shirts, uwe ogologo ọkpa, uwe elu, okpu na ngwaahịa ndị ọzọ metụtara ya.
Mmanụ Mmanụ Mmanụ Mmanụ Ala lectnakọta Market Market: Asọmpi Dynamics & Global Outlook 2025
Akụkọ | Jan-14-2021
Global Oil Station Gasoline Alụlụ lectnakọta System Market Research Report awade nnyocha na na miri ọmụmụ nke zuru ụwa ọnụ Oil Station Mmanụ Ala Alụlụ Colnakọta System Market maka ọbọ ofụri nghọta na azụmahịa ọgụgụ isi nke ahịa na Financial & Industrial A ...
Ihe Dị Iche Dị n’agbata Fablọ Dị Iche Iche Dị Iche, Gịnị Mere Ndị Ejiri Antistatic Họrọ Polyester?
Owu A na-akpọkarị owu. A na-eji eriri eme akwa na akwa. Owu owu nwere ike dị elu, ikuku ikuku dị mma, nguzogide ndagide na akụ adịghị mma; o nwere ezigbo okpomọkụ na-eguzogide, nke abụọ naanị hemp; ọ nwere ogbenye acid-eguzogide, na-eguzogide ọgwụ na itughari alkali na r ...
Ntuziaka Dị mkpirikpi maka akwa Antistatic
Ntụziaka dị mkpirikpi maka ákwà ndị Antistatic N'ime afọ ndị gara aga, ajujuola m ma akwa anyị ọ bụ ihe mgbochi, omume, ma ọ bụ mgbasa. Nke a nwere ike ịbụ ajụjụ gbagwojuru anya chọrọ obere obere na injinia ọkụ. Maka ndị anyị na-enweghị oge ahụ anyị dere edemede blog a bụ ihe na ...
5 Akwa nke Na-akpata Nsogbu Oge oyi Kasị njọ
Kwa ọnwa Nọvemba ị wepụtara uwe mwụda kachasị amasị gị nke na-arụ ọrụ nke ọma na sweta dịka ọ na-eme uwe elu nwanyị silky. Ma ụbọchị ole na ole, eriri ụkwụ gị na-arị elu n'úkwù gị nke abụọ ị ga-apụ n'èzí. Akụkọ ọjọọ:'ve nwere ọnọdụ. Iji zere ọnọdụ ọ bụla na-enwu gbaa, lee akwa ise a ...
Nwere ike ịmatakwu banyere anyị? Mgbe ahụ denye aha na akwụkwọ akụkọ anyị.